चुनावको निष्पक्षतालाई प्रभाव पार्ने कोशिस नगर्न पर्यवेक्षकहरुलाई निर्वाचन आयोगको आग्रह
शनिबार, मंसिर १६, २०७४
काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले विधिवत ढंगले निर्वाचन सम्पन्न गराउने आयोगको लक्ष्यलाई ध्यानमा राखि स्वतन्त्र र निष्पक्ष भुमिका निर्वाह गर्न निर्वाचन पर्यवेक्षकहरुलाई आग्रह गरेको छ ।
काठमाण्डौ, ललितपुर र भक्तपुरका पर्यवेक्षकहरुका लागि आज आयोजित पर्यवेक्षण तालिमका क्रममा आयोगले निष्पक्ष र स्वतन्त्र रुपमा जिम्मेवारी वहन गर्न आग्रह गरेको हो ।
राजनीतिक दलहरुले निर्वाचनको परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्ने गरी पर्यवेक्षकहरुलाई पनि प्रभावित पार्न खोज्ने र त्यस किसिमको पनि संभावना रहेको भन्दै आयोगले सचेत गराएको हो ।
निर्वाचन पर्यवेक्षकका लागि आयोगले निर्धारण गरेका सीमा र दायरामा रही आफ्नो भुमिका निर्वाह गर्नपनि आयोगले पर्यवेक्षकहरुलाई सचेत गराएको छ ।
आयोगले पर्याप्त मतदाता शिक्षा दिन नसकेको स्वीकार गर्दै प्रवक्ता ढकालले निर्वाचन सम्बन्धी कानुनको अभाव लगायत कारणले समस्या भएको बताए । मतदाता शिक्षाका कार्यकर्ता अहिलेपनि मतदाताको घरदैलोमा सक्रिय रहेको र सरोकारवाला निकाय, नागरिक समाज तथा राजनीतिक दलहरुले पनि मतदाता शिक्षामा सहयोग पुर्याइरहेको भन्दै बदर मतको संख्या कम हुने अपेक्षा आयोगले लिएको उनको भनाइ थियो ।
आयोगले २१ गते निर्वाचन हुने स्थानमा १८ र १९ गते सम्बन्धित मतदान केन्द्रबाट नै मतदाता परिचयपत्र वितरण गरिने जानकारी पनि दिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदाता नामावलीमा नभएका नयाँ मतदाताका लागि पनि मतदाता परिचयपत्र वितरणको व्यवस्था मिलाएको आयोगले जनाएको छ ।।
त्यसैगरी मंसिर २१ गते हुने दोश्रो चरणको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन नजिकिएसंगै तेह्रथुम जिल्लामा निर्वाचन सामग्री वितरणको काम सुरु भएको छ ।
निर्वाचनका लागि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले छथर, आठराई र फेदाप गाउँपालीका र लालीगुराँस नगरपालीकाका केही स्थानका लागि आवश्यक सामग्री वितरण गरिसकेको छ । बाँकी गाउँपालीका र नगरपालीकामा आजसम्ममा वितरण गरिसक्ने निर्वाचन कार्यलयले जनाएको छ ।
यसैगरी भोलिबाट मतपत्र सहित निर्वाचन कर्मचारी खटिने मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यलयले जनाएको छ । जिल्लामा ६६ हजार ६ सय ६७ जना मतदाता रहेका छन् ।
» नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा थुनामुक्त
» नेपाली कांग्रेसद्वारा देशैभरका १२ स्थानबाट संशोधन तथा सुझाव लिँदै
» गृहमन्त्रीद्वारा आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण तथा कालोबजारी रोक्न सम्बन्धीत निकायलाई निर्देशन
» प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा बिम्स्टेक सम्मेलनले नेपालले ठूलो फाइदा लिने वातावरण तयार भएको दावी
» बदनियत पुर्वक उपचार गरी विरामीको ज्यान गएमा उपचारमा संलग्न चिकित्सकलाई जन्मकैदसम्म र अंगभंग भएमा १५ वर्षसम्म कैद
» सरकारका ५ महिने कामको विवरण सार्वजनिक
» अझै तीन दिन लगातार वर्षा हुने
» दाङमा बाढीले यातायात ठप्प
» निर्वाचनको मिति कानुनमै व्यवस्था गर्न आयोगको आग्रह
» महाकालीको पुलमा सवारीसाधन अवागमन बन्द
» जुम्ला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको घटना छानविन गर्न समिति गठन
» मुग्लिन नारायणगढ सडक सुचारु
» म्यानपावर व्यवसायमाथि कडाइ गर्ने सरकारी तयारीबारे व्यवसायी नै विभाजित
» सुनुवाई समितिले प्रधानन्यायाधीशबारे अझै निर्णय लिन सकेन, अर्को बैठक शुक्रबार
» कानुनमन्त्री तामाङ सरकारबाट फिर्ता हुने
» कांग्रेसले केसीको हत्या गर्न र लाशमाथि राजनीति गर्न खोज्दैछ : प्रचण्ड
» उठ्न थाल्यो काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर
» नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा नवप्रवेशीलाई महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन रोक
» नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका शीर्ष पुरुष विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालको ३६औं स्मृती दिवस
» अनसनरत डा. केसीको अवस्था थप जटिल बन्दै, अकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्प पार्ने चिकित्सक संघको घोषणा
» सरकार स्वेच्छाचारी ढंगले अगाडी बढ्न खोजेको नेपाली कांग्रेसको आरोप
» डा. केसीको समर्थन र असंबैधानिक कदमको विरोधमा संसद अवरुद्ध पार्ने कांग्रेसको घोषणा